Iindaba-Uyilo olutsha lokukhanyisa
Uyilo olutsha lokukhanyisa
I-Aina Lighting iphuhlisa isibane esitsha esibizwa ngokuba yiBright-Mate
Bright -Mate: Ukukhanya okuphathekayo komdlalo kunye nokusebenza naphi na
Le mveliso idibanisa izibane ze-30W zamandla aphezulu e-LED, iibhetri ezinobungakanani obuphezulu, kunye nolwakhiwo oluxhasayo kwindawo evaliweyo yoonxantathu obunobude obude obuyi-98mm. Kulula kakhulu ukuphatha nokugcina. Ukulinda imeko kaxakeka namanye amaxesha.
Le mveliso inezinto ezininzi zoyilo, ezixhotyiswe ngemisebenzi eyahlukeneyo yokulawula kude, le misebenzi ilandelayo inokwenziwa ngolawulo olukude phakathi kwe-100m: eyona ndawo ikhupha ukukhanya ijikeleza iidigri ezingama-350 ukuqonda utshintsho olunamandla lokukhanya- indawo yokukhupha; umthombo wokukhanya uyilelwe ngohlobo lwe-shutter reflector, ngokulungelelanisa i-engile yeemfama ukufezekisa uhlengahlengiso lwe-angle yokukhanyisa kwesibane, ukubonelela ngokukhanya okunethezekayo phantsi kweemeko ezahlukeneyo zesicelo.
Uyilo olwahlukileyo lwesitshixo esinye sokuvula uyilo luwisa ifom yenkxaso yemveli, isenza ukuba imveliso ibe lula ngakumbi kwaye intle ukuyilungisa.
Ukukhanya kwale mveliso kunokuhlengahlengiswa ngokuqaqamba kunye nobushushu bembala, ubuninzi bokuphuma kokukhanya bunokufikelela kwi-4500lm, uluhlu lokwahluka kokuqaqamba yi-10-100%, kwaye uluhlu lobushushu olwahluka-hlukeneyo luyi-3000K ~ 5000K.
Le mveliso ifakwe ibhetri enamandla ye-lithium-ion enokunika ukukhanya okuqhubekayo kweeyure ezili-10 ngamandla apheleleyo. Isibane sixhotyiswe ngonxibelelwano lwe-USB, olunokuthi lubonelele ngenkxaso yokutshaja kwifowuni yakho ephathekayo kunye nezinye izixhobo eziphathwayo.
Le mveliso iqhotyoshelwe ngezinto ezahlukeneyo zokutshaja, kwaye zininzi iindlela zokongeza amandla ayo. Inokuhlawuliswa ngamandla orhwebo, iiphaneli zelanga kunye neemoto.
Imveliso yonke yi-4kg kuphela, kwaye uyilo lomtya wesandla kwimveliso kulungele ukutshintsha isikhundla nangaliphi na ixesha.
Le mveliso iya kuphuma kungaphelanga iinyanga ezimbini. Wamkelekile ukubona ukukhanya kwethu okutsha